Gnome iri kukanganwa nezve PC mushandisi | Kubva kuLinux
Gnome iri kukanganwa nezve PC mushandisi
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Chitarisiko / Kuita munhu, GNU / Linux
Ndinoziva kuti dzakawanda shamwari dzinotiverenga zuva nezuva dzinonamata Gnome goko. Ini ndatoona mune akati wandei makomendi sekufunga kwako pane gnome 2, kana kuoneka kwaro, kunogona kupfupikiswa neshoko rimwe chete: Chisina basa.
Ndinoremekedza maonero avo sekunge ndeangu. Wese munhu anoshandisa zvavanoda uye anozvigamuchira, asi mune ino kesi, isu hatichisiri kutaura nezve desktop desktop, asi nezve kupa zvibayiro zvekuwanika kana yekushandisa sarudzo patinenge tichishanda paPC yedu, tichifarira zvimwe zvigadzirwa. Uye iwe unogona kunge uchishamisika izvozvi chii chiri kutaurwa nemurume uyu? Huye, mhinduro kune iyo inogona kuwanikwa pane ino link.
Zvinoitika kuti izvozvi vagadziri ve Gnome ivo vachatora (kana kuti vakatomutora) dzimwe sarudzo ku Nautilus izvo zviuru kana mamirioni avanhu anoshandisa. Tiri kutaura, semuenzaniso, pamusoro pesarudzo dzinotevera:
Iyo compact dhairekitori uye faira kuona.
Iko kuona kwemuti kuchatsiviwa neiyo rondedzero.
Iyo yekuwedzera pani (nekudzvanya F3), ivo vanoti yapera saka inoenda.
Uye shanduko idzi dzese dzinouya gnome 3.6 ingori nekuda kwekuti kana ikashandiswa zvine hungwaru, haishande sezvavanofanira kuita. Uye ndinoshamisika:
Mushandisi wePC akagara kupi?
Ndiyo nhamba yevashandisi vanoshandisa Gnome pane zvigadzirwa zvefoni kana zvekubata?
Zvichaitika Gnome mune ramangwana kuve a Desktop Nzvimbo yakanangana chete neiyi tekinoroji?
Zvichida Gnome iwe wakaverenga pane maonero evashandisi vako kuti vaite izvi?
Sezvo zvakabuda Gnome goko Ini ndaiziva kuti zvinhu zvaisazofamba zvakanaka neiyi Desktop uye zvakajairika makomputa uye ini ndaive ndisina kukanganisa. Mhedzisiro yacho iri kutoonekwa.
Nekudaro, kana iwe uri mushandisi we Gnome uye iwe unoda kuramba uchishandisa izvi sarudzo mu Nautilus Fungidzira ndiani ari kuuya kuzonunura? Zvakanaka Ikey kudzidzisa game SolusOS, uyo ave kutoshanda kugadzirisa iyi gaffe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Gnome iri kukanganwa nezve PC mushandisi
Angelo Gabriel Marquez Maldonado akadaro
Dambudziko iri rimwe chete: Vakakanganwa mushandisi. Nekukanganwa nezve mushandisi uye kutanga iyo nyowani nyowani dhizaini pasina kuteerera kune pfungwa kana zvirinani kuti waita musika kudzidza kuti uone kuti iyo interface inogona kuvandudzwa sei, aya marudzi ekukanganisa anoitwa. Gnome yakakwezva vazhinji nekuve yakapusa, inochinjika uye inoshanda kwazvo, zvirinani ini ndakafunga kudaro; neGnome 3 yakauya nekushomeka kubva pakuona dhizaini, zviri pachena kuti dhizaini iyi haisi yePC asi yeMatafura kana zvigadzirwa zvekubata zviri kure nemushandisi wepakati pezvakatipoteredza. Ini zvechokwadi handifarire pfungwa kana mabatiro anoita timu yekusimudzira zvinhu, zviri pachena kuti ndinoremekedza basa ravo nemifungo yavo, ini handitombobvumirana.
PS: Ini handitendi zvakanyanya mu "yapera", Gnome 2 yakaunganidza izvo zvaidikanwa kuti zvishande zvakanaka, senge KDE. Gnome 2 yakanga isina kukwana asi ini ndinofunga mune pfungwa zvaive nani pane izvi.
Pindura kuna Angelo Gabriel Marquez Maldonado
Zvinonyadzisa. Ndakatanga paLinux neGnome 2 uye ndakave nekufarira nzvimbo iyoyo. Iye zvino ndanga ndichishandisa KDE kwemwedzi yakawanda uye, kwevhiki, ndanga ndichiedza neCinnamon, asi ndinofunga kuti mafambiro akatorwa naGnome, asina zvimwe, iwo kunyange ivo vasina kujeka nezvawo. Ini ndapa yako Shell mikana yakawanda, asi handikwanise kuiona yakakwenenzverwa pasi, uye handigone kujaira kune yakaoma uye yakasarudzika interface.
Kucheka kumashure pamashandiro uye kutarisisa pamabatiro ekushandisa kunoratidzika kunge kukuru kwandiri, asi zviri pachena kwandiri: kwandiri haisisiri sarudzo.
Gnome, wanga uchitonhorera kare…. pamberi peGnome 3 Shell ¬__¬
Mwari aponese SolusOS
Kana gnome ichizogadzirirwa zvirinani kuti zvishongedze michina inoyambira uye nekudaro vashandisi vePC isu tinokanganwa nezvazvo. Iye zvino desktop yakura zvakanyanya ndeye kde nekure. Bazi 4 rinonatsiridza nega yega yekuvandudza uye zviwanikwa zvekushandisa zvakanyanya kunyangwe iine gnome-shell. Uye iko kuita kwekuratidzira, usandibvunze kuti sei, mune gnome zvinotyisa, kutsetseka-scroll yebrowser, kuona kwemamuvhi ... nezvimwe. Zvirinani pane yangu pc, kunyangwe gnome ichidya gondohwe shoma, mhinduro yesystem inononoka kupfuura mu kde (gnome 3.4 / kde 4.8).
Pindura kuna ridri
Chimwe chinhu chakafanana chinoitika kwandiri, nechimwe chikonzero ini handisati ndanzwisisa KDE kunyangwe ichidya yakawanda, ine kuita kuri nani pane GNOME.
Zvinotaridza kwandiri kuti imhaka yekuti Kde inoshandisa zvishoma cpu. Ini ndaisiya peji kwandakaiona asi handichakwanise kuiwana
Rumbidzai Mwari Ikey !! hehe ..
Hapana kana chinhu, kana chinguva chidiki chakakurumbira uye chakapusa KDE vs Gnome gakava, ndingadai ndakati chii nhasi mushure mekuziva dzimwe sarudzo dzaunobvuma nekupfupikisa mune rimwe izwi: Zere.
Usapenga, asi urombo kana ndikaseka. LOL…
Ini ndaitoziva kuti makore apfuura ...
Zvakanaka, hongu, zvinosuwisa kuti sarudzo idzi ndidzo dzinovhiringidza mushandisi. Zvinosuruvarisa. Ndakauya kuLinux nyika kuburikidza neSuse neGnome 2, uye yaigara ichiita senge huru, inochinjika uye isipo pamatambudziko makuru. pakauya Gnome 3, ndakaiona ine kubatabata asi ndakayedza. Zvaiita kunge shanduko kwandiri, ndichivhuna nekuremekedza sarudzo dzaive dzatove mumusika. Yakashaya sarudzo, hongu, asi paive netariro huru yekuti shanduko yayo yaizogadzirisa kushomeka uku. asi ini ndinoona kuti munzira, ivo vakakanganwa chakanyanya kukosha chinhu: mushandisi. uye ndiko kukanganisa kukuru kwazvo kunogona kuitwa. Ini ndinonzwisisa kuti ndeye mahara software, ndinonzwisisa kuti kana ndisingazvifarire, ndinogona kusarudza kubva kugungwa rezvingaitika, asi, kuve pamwe chete neKDE, mapiyona mukugadzirwa kwenzvimbo dzedesktop, ndingadai ndakatarisira zvimwe zvishoma. Uye kunyangwe ichinzwika senge musoro, ini ndinofunga ichi ndicho chinyadzo chekuvandudzwa kwekubudirira kweXFCE, uye kwemastros seMint uye ikozvino SolusOS, iyo yakaedza kufambira mberi, asi ichinyatso chengeta izvo zvinhu zvinokwezva uye zvinoita kuti hupenyu huve nyore kumushandisi. Uye kana ndikati mushandisi, ini handisi kungotaura nezve avo vanogadzirisa yega yega yekupedzisira faira faira kuti vasiye desktop pakuda kwavo, asi zvakare nezve avo vaona sarudzo muGNU / Linux, uye ndiani angade zvese kuti zvishande mu intuitive uye yakapusa.
Ini ndinobvumirana 100% newe Marco. Uye ndinofungidzira kune vazhinji vashandisi vanofanirwa kunzwa zvakafanana. Ini ndingashinga kupa maonero akafanana kuna Elav pano pablog uye nezvose zvivakwa ndatenda ndikapa Gnome 3 mukana wayo.
Chinhu chakanaka ndechekuti muLinux mune zvese uye zvevose. Chinhu chakashata ndechekuti hazvizivikanwe kuti kupatsanurwa kunogona kuita sei sezvazvinotaridza izvozvi.
Zvisinei, ikozvino ndiri mushandisi anofara ne KDE, chimwe chinhu icho pandakatanga neLinux neGnome 2.x ini ndingadai ndisina kumbofungidzira.
Zvakaitika zvakafanana kwandiri. ndiri munzira kuburikidza neLinux, handina kumbofungidzira kuenda kuKDE, uye ndiri pano, rinenge gore gare gare, naChakra !!! ikozvino handiregi kuenda! 🙂
Ndiine KDE ndinonzwa ndakachengeteka ... kure neese matambudziko uye matambudziko, kusagadzikana mamiriro uye kusawirirana kuripo kwakatenderedza Gnome, Cinnamon, Kubatana, uye zvese izvo hahahaha.
zvakafanana kwandiri, KDE yakanaka. kunyangwe Kubatana kwakanaka, uye ini ndinoifarira iyo Gnome Shell.
KDE yakanaka, ndakaidzorera mushure menguva yakareba ndokudanana zvakare xD
Ini ndiri mushandisi weDebian, ini ndichiri kushandisa iyo "isingachashandi" vhezheni yegnome, uye ndichagara nenzira iyoyo sekureba kwandinogona. Ini ndinofunga iko kukanganisa kukuru uye kana pakupedzisira shanduko idzi dzikasvika gnome inoenderera ichirasikirwa nekuda kwenzvimbo dzinoshanda uye dzakareruka.
Pindura kuna ajuradoperez
Chekutanga pane zvese kugamuchirwa kune saiti 😉
Uye hongu zvirokwazvo, ndinofunga kuti "kugadzirwa pamberi pezvose." Kana ini ndichida kushanda uye kutarisa pamabasa akakosha, ini handifanirwe kushandisa nguva kudzidza mashandisiro enzvimbo yedesktop, kana neyangu (kunyangwe ichionekwa seisingachashandi) ndine basa rangu rakagara richiitwa.
ElementaryOS ine pantheon-mafaera
Pindura kune newb23
Ini ndinotenda kuti seese maFree Software pachagara paine sarudzo yekumisikidza iwo mashandiro asiri ekutadza uye kana iwe usingakwanise, saka tinovagadzira, nekuti ndiko kubatsirwa kweFree Software.
Pindura kune elin3t
Ndine SolusOS, ndinoifarira nekuti inoshandisa gnome sezvandaigara ndichifarira.
Iyo kambani inoona nezve yakawanda yekuvandudza kweiyo gnome iri redhat kana ini ndisina kukanganisa, ndiani anoziva iro ramangwana chinangwa. Kunze uko vanoda kupinda munyika yematafura. Vanhu veKDE vari kugadzira nharaunda yemapiritsi vasina kubata desktop.
Chokwadi ndechekuti kubvisa mashandiro nezvimwe, zvinoita kwandiri kunge kushomeka kune mushandisi. Sarudzo dzavanobvisa dzakanyanya kukosha, semuenzaniso kuenderana kwemafolda uye mafaera.
Ichokwadi, kana ivo vaida kutarisa pamateyuro uye mapiritsi, vangadai vakagadzira musiyano wezvinhu izvi, uye kwete kusiya mushandisi wePC asiiwa.
Asi chii chauri kumirira, hongu GnomeClassic Izvo zvinouya sei nekutadza? Iwe unofunga kuti vane hanya nazvo here? Zvinotaridza kuti vavaki ve Gnome akapiwa iPads kana zvinhu zvakadaro uye ivo vanongofunga nezve mapiritsi uye mafoni ... ndinozvidzokorora zvakare: Kana Gnome ichashandiswa pamidziyo iyoyo.
Ndinoda kuziva kuti ndeipi Tablet iyo Gnome programmers bvunzo pairi. Pahwendefa rangu reHP neWebOs ini ndinoedza kuisa Linux uye zvimwe zvinhu zvisati zvashanda (kurira, bluetooh, kamera)
Kana ivo chete chirongwa chema touchscreen vanogona kudzikisa bofu vodzokera kumba, hapana kana munhu anochishandisa. Uye kuti avo vedu vaishandisa Gnome senguva dzose vaive vasiri vazhinji 🙂
Iko hakuna hwendefa pamusika neGnome, mapeti ekubata ePc kana notibhuku anorambidzwa. Mukupedzisa ivo vanoshandira chero munhu. Chero ivo vanodzokera kune kwavo sosi kana zvirinani kuti vazvipire ivo pachavo kune chimwe chinhu.
Bhuku reManyuko akadaro
Sezvo iko kufara kwematafura kwakatanga, zvinoita sekunge software yakamira kuchinja uye ikatanga kudzoreredza. Pamberi, chinangwa chaive chekuita kuti zvirongwa zviwedzere kusimba uye zvishande; ikozvino ndezvekutora ichi neicho kubva kwavari kuitira kuti mahwendefa akakomborerwa agone kuvatsigira.
Ini ndaifara kwazvo nezvekubata tekinoroji pakutanga, asi ini handina chokwadi zvekare. Zvirinani izvi handizvo zvandaitarisira.
Ndinozviona zvinosuruvarisa zvavari kuita neGnome, ini ndinoda Gnome Shell, asi ivo vanofanirwa kuona kwenguva yeropa kuti ine usability zvikanganiso, uye kuti havagone kutarisa zvakanyanya pamahwendefa, kunze kwekutaura kwaunoti Elav, ndinofunga Gnome 3 haishandiswe mumatafura, kunyanya nekuti mapiritsi anogona kutengeswa neApple, uye zvinonetsa kwazvo kumisikidza imwe OS kana iwo ari Apple iPad.
Iri kupi nzanga yeGnome? Ndezvekuti ivo havachavateerera here? Kana kuti ndeyekuti ivo vanogadzira vanongofunga nezve avo mazano uye kuti vashandisi vanofanirwa kugara navo pasina mubvunzo?
Chero bedzi ivo vachiramba vachitevera izvi, ini ndinonamira ne KDE, nekuti Gnome 3, kunyangwe ichinakidza, inonetsa kwazvo kuchinjira kune zvandinoda, XFCE haina kundipa izvo zvandinoda uye LXDE, ndinoifarira, asi haina kana graphic mhedzisiro kana chimiro chakanaka chekuona.
Pindura kuna ergeo
XFCE haina kundipa izvo zvandinoda uye LXDE, ndinoifarira, asi haina kana graphical mhedzisiro kana yakanaka yekuona chimiro.
Chii chaunoda kubva Xfce? Vhura LXDE inogona kuverengerwa zvishoma, uye shandisa Compton kuva nemari ... 😀
Hazvisi izvo zvandinoda kubva kuXFCE kunyanya, asi izvo zvandinoda kubva pakombodhi yemamiriro ekunze, ini ndoda maturusi akanaka uye maapplication akaisirwa nekukasira, chitarisiko chakanaka chekuona kubva paminiti rekutanga rekushandisa (kana iwe wakamboona XFCE ine theme nekutadza, semuenzaniso kuti inouya sei muFedora, iwe unozoziva zvandiri kutaura nezvazvo), uchikwanisa kuigadzirisa zvandinofarira nezviuru zvemadingindira uye kushongedzwa kwemawindo, pamwe nemifananidzo yemapepuru zviri nyore, yakajeka graphic mhedzisiro yakatobatanidzwa. kupinda muchirongwa, mashandisiro akanaka ezve zviwanikwa (ipapo XFCE iri nani zvirinani) ... izvi zvinhu zvaunogona kuita neXFCE, asi ini handina nguva yekugadzirisa nharaunda yese sekuda kwangu, ndinoifarira iyo yatove chikamu chaitwa, kuti ibasa diki kundinunura ...
Uye hongu, LXDE inogona zvakare kugadziridzwa, asi iine chikanganiso chakafanana neXFCE, theme yekumisikidza yakashata (ichidaidza kuti inobatsira maPC aine mashoma zviwanikwa), uye pane izvi zvinoda mari yakawanda kuwana sarudzo dzekumisikidza ... ini ndinoda KDE zvirinani nekuti kubvira pakutanga zvinondipa zvakawanda, uye nezvechimiro chayo chekuona.
Ini ndinoremekedza zvachose kuti iwe unoda XFCE, uye kuti kwauri ndiko kwakanyanya, chinhu chimwe chete chinoitika kwandiri ne KDE.
Panguva iyi Nautilus achange ave nemabasa mashoma pane iyo maneja wefaira pane yangu mbozhanhare. Asi ini handina kunetseka nekuti inogona kugadziriswa neresipi yeguru ... Ndeipi panorama, kusasimba kana kusachinjika shanduko ... Neraki kune dzimwe nzira dzezvose zvido.
Nautilus ichave yakaita saRox Fm, asi zvirokwazvo ichidya zvakapetwa kagumi
hahahahahahaha !!!! +1
Ndosaka ndakachinjira kuLXDE, tsika yakanakisa ine metacity: D ... kunze kwepcmanfm, kunyangwe isiri Nice, inoshanda kune icho chakagadzirwa, kuwedzera kutsigira zvigunwe. Iko kumisikidza kuri nyore.
Pindura kuna Christopher
Ini ndinonyatsoona Gnome chaizvo beta.
Nautilus, ini handina kuzombokwanisa kutsvaga chimwe chinhu.
Iwo ekuwedzeredzwa, mushure mekunge mangani vhezheni asingaasanganisi seasina kukwana. Iwe unofanirwa kuvatora kuti vaputse desktop.
Bvisa iyo gelatinous mhedzisiro, yavo yakati ive yechinyakare chitarisiko (ma icon, windows, cursor), zvakanaka iwo matambudziko e gtk.
Kwete zvese zviri zvebhuruu ini ndaifarira kutaridzika kutsva kwegnome 3, zvishoma "kunakidza". Sinamoni yakauya kuzochengetedza zuva, kutaridzika zvirinani, kuita zvakasiyana-siyana, zvinodya - ndingati - hafu zviwanikwa zvegnome 3 ine zvigadziriso zvenguva dzose.
Mukuvhara, KDE iri nani sarudzo.
Ichokwadi ndechekuti mushure meiyi shanduko, ini ndichiri kutsvaga maneja wandinoda, iyo gnome2 inounzwa naUbuntu, zvinoita sekuti "cheka", handidi kubatana, negnome 3 zvakaita sekufanotaura kwandakaita kumhanya, nesinamoni ini Chinhu chimwe chete ichi chinoitika, ikozvino semuenzaniso ndiri kushandisa asoweme, asi ndinonzwa kunge ndiri kudzokera kumashure. Izvo zvavakataura nezve rimwe rinowedzera (nekudzvanya F3), ini ndinogara ndichishandisa, zviri nyore. Ichokwadi ndechekuti isu tinotarisira kuti gnome 3 inochinja zvishoma. Mufaro!.
Pindura kuna ariel
Aaron Mendo akadaro
Zvinonzwika zvakanaka kwandiri: D. Ini ndinoshandisa nautilus uye ndinoziva kuti zhinji dzesarudzo idzi dzinenge dzisina basa, semuenzaniso, kunyangwe vachibvisa macompact maonero, iwo muti wekutarisa unoramba uchiripo uye iwo maonero anoita zvakafanana asi zvirinani basa kupfuura iro rakabatana pane yangu maonero, iyo yekuwedzera pani haichaoni zvichidikanwa kana iwe uchigona kuisa maviri nautilus windows imwe pane imwe neimwe hafu yechidzitiro kana kushandisa tabo.
Pindura kuna Aaron Mendo
Ini ndinobvumirana newe .. ndizvo chaizvo zvandinoita ^ _ ^
Hei aripi @Perseo .. Kunenge kusisina sei de Fedora?
Kana vabvisa chimwe chinhu chausingafunge "sechisina basa," iwe uchaona kuti chinotaridzika sei kwauri. Ivo vari kuputsa Nautilus. Shanduro nyowani dzisati dzareva kufambira mberi, kwete zvinodzosera kumashure. Kuva nezvimwe sarudzo kunoita kuti usashande here? Ndiri kukura.
Tariro Nautilus anorexia inopa yakareruka faira maneja. Kuderedza uremu uye kungoremerwa zvainga zvisina basa.
Izvo zvinongoramba zvichitarisira kuti kuchave nemhedzisiro yezviitiko.
Pane sarudzo XFCE, Cinnamon, kana iyo nyowani kubva kuSolus (iyo ichiri isina zita xD)
Uye vashandisi veNetbook vanozviitirei? Uye zvakare, zvinoratidzwa kuti mapaneru nematabhu zvine zvibereko pane kuvhura mawindo maviri ... ndinokuudza izvi kubva pane zvakaitika kwandiri nekushandisa Thunar.
Pamwe kana paine zvichemo zvakawanda, havafanirwe kuibvisa, chokwadi ndechekuti havafanirwe kubvisa chimwe chinhu chinoshanda kudesktop asi chinounza matambudziko ekubata, nekuti izvo zvinoita vhezheni chaiyo yekubata ...
Zvakanaka, ndinofunga ivo vanoda kuzvichengeta zviri nyore sezvinobvira, kwete zvakanyanya se kde dolphin ine infinity yesarudzo iwe yaunogona kukanganwa izvozvi uye unofanirwa kutsvaga iyo sarudzo zvakare.Ndinofunga chingave chikonzero changu chete : S
Baltazar Calderon akadaro
Zvakashata pane chikamu chevagadziri veGNOME, chaizvo, yanga iri yangu yekuda DE kare, zvinonyadzisa chaizvo ... Ndatenda runako ndakachinjira kuXFCE mwedzi wapfuura uye ndakazojaira.
Pindura Baltazar Calderón
Dzimwe sarudzo dzinogona kubviswa asi mapaneru maviri akakosha uye akasununguka zvakanyanya kupfuura iwo matabo kana maviri windows ... chii chavanozobvisa? Aya kubva kuGnome Team ari kusvuta chimwe chinhu chakashamisa.
Asi elav, chokwadi ndechekuti haisi tafura yakatarisana netafura chete, isu tanga tambotaura nezvayo nzira yekushandisa iyo keyboard zvakanaka?
Uye chimwe chinhu chiri chokwadi ndechekuti idiki pane ayo matambudziko, Gnome 3 ine yakanyanya kukundikana kushomeka kushomeka, ingovhura zvivakwa zvefaira mune 10-inch latop, kuti uone chakakomba.
Handisi kuti yakanangana nemaTablet, ndiri kungotaura kuti ndinofunga chikanganiso kubvisa zvinhu kubva paDesktop (zvinhu zvinoshandiswa paPC), nekuti hazvishande pamidziyo yekubata .. ngavachiite yega vhezheni yavo.
Vanobvumirana zvachose ... Kana kuti ivo vanopa sarudzo yekusarudza pakati pekubata nedesktop, kuti vasabvise sarudzo yekudzima nevamwe.
Iwe waizofanira kuvabvunza kuti sei vakazviita chaizvo? nekuti kana tikatanga kuwana manhamba, ehuwandu hwevashandisi vemakomputa, vangani vanoshandisa GNU / linux? Vangani veavo vanoshandisa Gnome? Vangani veizvi vanoshandisa kubata? zvinoita kwandiri kuti chikamu chidiki kwazvo.
Ivo vari kungozvipira vateveri / vateereri / mafeni / vashandisi vavanavo izvozvi, kuti vawane vateereri venguva yemberi (uyo anoshandisa / anoshandisa zvigadzirwa zvekubata).
Fredy Kudzai Madina akadaro
chii chakaitika kwauri gnome usati watonhorera
Pindura kuna Fredy Quispe Medina (@powerfredy)
Ndiwo mubvunzo mumwechete wandakazvibvunza 🙁
Ini ndinoda gnome 3, kunyangwe zvave zvinonetsa kuchinjira kugobhu uye ndinobvuma kuti zvishoma nezvishoma dzimwe nzira dziri kutama, uye kukanganwa dzimwe tsika; uye gnome 3.xa yakakanganwa desktop desktop, ndiko kuti, kukanganwa kugutsikana kwatinonzwa kana tichichinja mavara, maumbirwo emifananidzo, chinzvimbo chemazariro, nezvimwe. Ndiri kureva, iwe unofanirwa kuve unove mushandisi wepamberi kuti uite zvese izvi zvigadziriso ... zvakanaka ini zvakare ndinofunga kuti havazi vese, kana vanhu vese vane chekubata chekubata, mune yangu, uye munyika yangu GT kubata vatariri zvinodhura zvakanyanya uye ndinofunga kuti havazi vese vanogona kutenga imwe, ingangoita zana pc iyo ini yandinotarisa kune imwe yacho inobata ...
Pindura kune hasolver
Livio Gamboa Tosca akadaro
Munyika ino yeprogramme ini ndakadzidza kubva kune chimwe chinhu chandakaverenga "Usavaite vafunge" uye zvinoita sekunge izvo zveGnome, Ubuntu neUniity yavo vakakanganwa ...
Pindura Livio Gamboa Tosca
Kugadzirisa Gnome: Iyo SolusOS Nautilus Patch
Kutanga matanho neUbuntu 12.04 [Ubuntu Chinyorwa]